IMF Yorumbidza Zimbabwe Pakurwisa Huwori
Chikumi 13, 2022
Mutevedzeri wemukuru weInternational Monetary Fund kana kuti IMF Amai Antoinette Sayeh, vanoti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dziri kuyedza kudzika hurongwa hwakanangana nekuona kuti hupfumi hwenyika huri kubatsira munhu wese senzira yekuderedza huori nenhamo munyika. Asi vamwe vanopikisa vanoti hurumende inongodzika mitemo asi hapana zvainozoita kuitevedzera.
Vachivhura zviri pamutemo musangano wemazuva maviri wekusimudzira hutongi hwejekerere uye kurwisa huwori weHigh-Level Conference on the Promotion of Good Governance and Fight Against Corruption muguta reGaborone nhasi, mutevedzeri wemukuru weIMF, Amai Antoinette Sayeh Antoinette vati Zimbabwe imwe yenyika dziri kuyedza kudzika hurongwa hwakanangana nekurwisana nehuwori.
Vaenderera mberi vachiti vatungamiriri vemuAfrica, kusanganisira VaEmmerson Mnangagwa, vari kuita zvese zvavanogona maringe nekuti zviwanikwa zveveruzhinji zvishandiswe nemazvo.
Amai Sayeh vati nyika dzinoti Botswana, Zimbabwe, Mauritius pamwe chete neGhana dzakagadzira hurongwa hwakanaka hwekugadzirisa hupfumi kunyanya munyaya dzemari dzisina kuchena kana kuti money laundering muchirungu.
Muhurukuro neStudio7 kumucheto wemusangano uyu, mukuru muchikamu chekuferefeta mabasa emari inogona kuzoshandiswa mumabasa ehutororo nezvimwe zvisiri pamutemo kana kuti Financial Intelligence Unit munyika, VaOliver Chiperesa, avo vapinda mumusangano uyu, vanoti IMF yabaya dede nemukanwa mukupembedza kwayo Zimbabwe.
Kubva zvakaumbwa chikamu ichi munyika, VaChiperesa vati vakawanda vasungwa.
Asi nyanzvi munyaya dzezvehupfumi musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, VaProsper Chitambara vanoti hurumende yakafanira kudzikisa gejo mukuona kuti mitemo yakadzikwa iri kushanda nemazvo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu nemamwe mapazi eUnited Nations anoona nezvemafambisirwo emari ari kupomerawo hurumende yeZimbabwe mhosva yekushandisa mitemo yakaita seweFinancial Action Task Force wekuona kuti mari hadzipinde nemunyika kunobatsira zvikwata zvinopfurikidza mwero kudzvinyirira masangano akazvimirira oga.
Mukuvandudza mutemo weFATF uye Zimbabwe yakabva yati yave kuvandudza mutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira wePrivate Voluntary Organization Act izvi zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu.
Hurumende inoti hayo iri kurwisa huori ichipa muenzaniso wekukandwa mujeri svondo rakapera kwaAmai Petronella Kagonye, avo vaimbowe gurukota rezvevashandi, vawanikwa vaine mhosva panyaya yekuba malaptop.
Pane vanhu vakati wandei vanosanganisira vaimbova gurukota rezvematunhu VaIgantious Chombo pamwe nevaimboiva gurukota rezvevashandi , Amai Prisca Mupfumira vachine nyaya dziri mumatare vachinzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavaiva muhurumende.
Nyaya Ina Shingrirai Madondo